Indlu Ephindwayo: Shayela iTraffic Engaphezulu kanye Nemikhondo Ngale Nsizakalo Yokuqukethwe Yezindaba Zomphakathi Ezingabiwa | Martech Zone
Amabhizinisi, kufaka phakathi nelami, ahlala enza okuqukethwe okusha nokumangazayo kwamasayithi abo - kufaka phakathi amavidiyo, ama-podcast, nama-athikili. Ngenkathi ukudalwa kumangalisa, kuvamise ukuba nomjikelezo wempilo omfishane walokho okuqukethwe ngokuhamba kwesikhathi… ngakho-ke imbuyiselo ephelele ekutshalweni kokuqukethwe kwakho ayikaze ibonwe ngokweqiniso.
Kungezinye zezizathu zokuthi ngicindezele amaklayenti ethu ukuthi acabange kabanzi maqondana nokwakha i- umtapo wokuqukethwe kunokusakazwa okungapheli kokukhiqizwa kokuqukethwe. Kukhona enye inkinga ngokwenziwa kokuqukethwe okuningi, futhi, noma kunjalo ... asiguquli futhi ukuphindisela okuqukethwe ukushayela impendulo eyengeziwe ngamanye ama-mediums.
Lapho sisebenza namakhasimende, sizovame ukuthatha okuthunyelwe kwebhulogi okuthandwayo bese sikusebenzisa kube yi-infographic, bese kuba i-infographic ibe yiphepha elimhlophe, bese kuba iphepha elimhlophe kwi-webinar… kuqhubeke nokuqhubeka. Inqubo isebenza ngokumangalisayo ngoba sesivele sazi ukuthi okuqukethwe kuyathandwa… ngakho-ke ingozi nezindleko zokuyibuyisela kabusha kuyancipha. Ukungasho ukuthi okuqukethwe okuphilayo kune-ROI enkulu kakhulu kunokuthola imikhondo ngokukhangisa.
Kepha… ukuthola isikhathi nethalente lokwakha nokuphindisela izimpahla kuyinselelo kuwo wonke amaqembu okukhangisa. Cabanga nje uma ngabe ubungaba nensizakalo engaklama futhi inwebise okuqukethwe kwakho okulungiselelwe kokuxhumana nomphakathi nsuku zonke kuwe…
Indlu Ephindwayo isevisi eguqula okuqukethwe kwakho kwebhulogi, ividiyo, noma i-podcast kube yimiklamo yangokwezifiso elungiselelwe ukwabiwa ku-Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, naku-LinkedIn.
Ubhangqwe nabaklami bokuqukethwe abazinikele, abahleli, nabahleli bezokuxhumana ukuze uthumele ividiyo nama-audiograms aklanywe ngokwezifiso nangamazwibela, izingcaphuno zezithombe, nezithonjana ezifomethwe kokuphakelwa komphakathi, izindaba kanye ne-Youtube. Izici ze-Repurpose House:
Ukuthuthukisa - Izimpahla zibhalwe futhi zalinganiswa ngokufanele kuwo wonke amapulatifomu.
Umkhiqizo - Okuqukethwe kwesithombe nevidiyo kuhlale kufakwe uphawu ngezifanekiso okuvunyelwene ngazo ezibukeka zimnandi.
Isilinganiso esiphansi - intengo eyodwa, njalo ngenyanga, isetshenziswa ngokuya ngokuthi kungakanani okuqukethwe ofuna ukuphinda kukhishwe futhi kuthunyelwe.
Ukulethwa okusheshayo - thumela isicelo ngo-5 PM bese uthola impahla ekuseni!
Ngena ngemvume, qala ithikithi, unikeze i-Content Hacker yakho imininingwane ethile, isixhumanisi esiya kuvidiyo / umsindo wakho noma amagama angafika ku-100 ombhalo ovela kokuthunyelwe kubhulogi, naku-tada - ungathola amafa afinyelela kwayi-9 ngesicelo ngasinye!
Hlela Idemo Yendlu Ephindwayo
Izibonelo Zendlu Ephindwayo
Nazi ezinye izibonelo ezinhle yokuthi isevisi yabo ikuthuthukisa kanjani okuqukethwe okuvelele, okunophawu, nokwenziwe ngcono… kufaka phakathi ama-meme evidiyo, ama-audiograms, nezingcaphuno zezithombe:
Yakhelwe kokuqukethwe kwakho kwevidiyo, Indlu Ephindwayo ingeza isihloko namazwibela afundekayo (kuhle ngoba abantu abaningi bathulisiwe ivolumu yabo):
Idizayinelwe isifinyezo sombhalo esivela kokuthunyelwe kwebhulogi noma i-athikili, lawa mavidiyo mahle ngokuthengisa kokushayela futhi aholele kusuka kwimithombo yezokuxhumana ubuyela kusayithi lakho.
Ama-audiograms ngamavidiyo akhiqizwa ngesilinganiso esivela ku-podcast yakho ukushayela abantu ukuthi babhalise futhi balalele.
Dizayina isithombe esihle usebenzisa isicaphuni esivela ku-athikili yakho, ividiyo, noma i-podcast ukushayela ukuqwashisa okungeziwe ngeziteshi zemidiya yomphakathi.
Amaklayenti we Indlu Ephindwayo babona ukwanda kwamaseshini esayithi ayi-138% futhi kuhola ngama-300%… ngaphandle kokuchitha idola kwezokukhangisa. Konke ngokufaka kabusha okuqukethwe kwakho okukhona bese ukwaba eziteshini zemidiya yezenhlalo ngamasu.
Qalisa Nge-Repurpose House
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene we Indlu Ephindwayo.
Tags: I-audiogramama-audiFacebookUkukhangisa ku-Facebookizingcaphuno zesithombeinstagramukumaketha kwe-instagramamavidiyo e-instagramLinkedInukuxhumana kwe-linkedinukuphindiselaokuqukethwe okwenziwe kabushaindlu ephindayookuqukethwe ezokuxhumizithombe zokuxhumana nabantuamavidiyo wezokuxhumanaTwitterUkumaketha kwe-TwitterAmagama-ncazo wevidiyoyoutubeukumaketha kwe-YouTube